मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन - टि. एल. एन पोस्ट
Home अर्थ मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपीओमा आवेदन दिने आज सोमबार असार २१ गते अन्तिम दिन हो । यसले असार १७ गतेबाट आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । यस आइपीओमा मागभन्दा निकै बढी आवेदन परिसकेको छ । बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलका अनुसार आइतबार साँझसम्ममा यसमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्या १७ लाख नाघेको छ ।
१७ लाख ६३ हजार ७९४ जना आवेदकबाट २ करोड ३२ लाख ७ हजार ४६० कित्ताका लागि आवेदन परिसकेको छ । यो आवेदन सर्वसाधारणबाट माग गरिएको भन्दा ६३.८४ गुणा बढी हो । मनकामना स्मार्टले १०० रुपैयाँ दरको कुल ३ लाख ८९ कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । यसमध्ये ०.५% अर्थात ६ हजार ५८ कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र ५% ले हुने १९ हजार ४५० कित्ता सेयर म्युचुअल फन्डलाई छुट्याइएको छ ।
बाँकी ३ लाख ६३ हजार ४९२ कित्ता सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो । मनकामनाको आइपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताले आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा मेरो सेयरमार्फत अनलाइन आवेदन पनि दिन सक्नेछन् ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले मनकामना स्मार्ट लघुवित्तलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ डबल बी माइनस’ रेटिङ दिएको छ । यसले निष्कासनकर्ता कम्पनी समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँछ । इक्राले गत फागुन ११ गते उक्त रेटिङ दिएको हो । यो रेटिङ आगामी फागुन ११ गतेसम्म बाहल रहनेछ ।
Previous articleनारायणगढ–मुग्लिन खण्ड फेरि अवरुद्ध
Next articleनिर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि दियो समय
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने